फोटोशप प्रयोग गरेर काठमा कसरी लोगो स्ट्याम्प गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
पिनटेरेस्ट वा इन्स्टाग्राम ब्राउज गर्ने क्रममा एक पटक भन्दा बढि, तपाईको छविहरू आइसकेका छन् काठकोट लोगो। यो प्रभाव ब्रान्डि and र ग्राफिक पहिचानमा निश्चित प्रकारका ब्रान्डहरूको प्रयोग गर्दछ, विशेष गरी मासु रेस्टुरेन्ट, ह्यामबर्गरहरू, कफि पसलहरू वा कम्पनीहरू जसले काठको साथ सिधा काम गर्दछन्।
यस प्रभाव प्राप्त गर्न धेरै तरिकाहरू छन् र अधिक यदि तपाईं फोटोशप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तर सबै चीज तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ परिणाममा निर्भर गर्दछ। लोगो स्ट्याम्ड देख्न सकिन्छ काठमा, यो जलाइएको जस्तै, रेकर्ड गरिएको, थोरै गहिरो र राहत संग, र पनि चित्रित।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई सिकाउनेछौं फोटोशपमा काठमा छापिएको लोगो कसरी बनाउने।
1 ग्राफिक स्रोतहरू र फाइल तयारी
2 तहहरू तपाईंले सिर्जना गर्नुपर्नेछ
3 प्रक्रियाको पहिलो भाग
4 नयाँ तह बनाउनुहोस्
ग्राफिक स्रोतहरू र फाइल तयारी
तपाईं हुनु पर्छ पहिलो कुरा एक हो पृष्ठभूमि छवि यो एक लकड़ी बनावट बनाउँछ। तपाईं आफूले मनपराउने एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ: हल्का, गाढा, बढी राहतको साथ वा कम राहतको साथ।
तपाईं लोगो दुई तरीकाले राख्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंले फोटोशप कागजातमा पाठ पाठमा लेख्नुहुन्छ: निश्चित गर्नुहोस् कि टाइपफेस ठूलो र सुवाच्य छ।
तपाईले फोटोशपमा PNG को रूपमा पृष्ठभूमि बिना राख्नुहुन्छ, वा जस्तो कुनै पृष्ठभूमि बिना स्मार्ट वस्तु.
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंको लोगो सँधै पारदर्शी पृष्ठभूमिमा हुनुपर्दछ र कालोमा, यदि तपाइँ यसलाई पाठ तहको रूपमा राख्नुहुन्छ वा PNG को रूपमा।
अब तपाईंको फोटोशप कागजातमा तपाईंले यी दुई तत्त्वहरू मात्र राख्नुपर्दछ, र लोगो तह लकड़ी बनावट माथि हुनेछ।
कुनै पृष्ठभूमि बिना कालो लोगो काठ बनावट तहमा छ
तहहरू तपाईंले सिर्जना गर्नुपर्नेछ
द्वारा सुरु गर्नुहोस् लोगो तह नक्कल, कुञ्जीपाटीमा तपाई यो आदेशको साथ गर्न सक्नुहुनेछ CTRL + जे, ताकि तपाईं एक जस्तै दुई छ।
लोगोको दुई तह बीचमा, नयाँ लेयर सिर्जना गर्नुहोस् र सेतोमा भर्नुहोस्। तपाईं उपकरण प्यानलमा र paint्ग पोटको साथ यो मैन्युअल्ली गर्न सक्नुहुन्छ (यसको आदेश कुञ्जीपाटीमा हो अक्षर जी), वा तपाइँ पनि थिच्न सक्नुहुन्छ CTRL + हटाउनुहोस् र स्वचालित रूपमा सेतोले भरिएको छ।
चयन गर्नुहोस् लोगो केप जुन माथि छ सेतो लेयर, र यसलाई जोड्नुहोस् पछिल्लो संग। कुञ्जीपाटीमा तपाई यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ CTRL + ई।
नतिजाको रूपमा तपाईसँग हुनेछ कालो मा लोगो संग एक सेतो पृष्ठभूमि केप, अर्को तह पारदर्शी पृष्ठभूमि र काठ बनावट तहमा तपाईंको कालो लोगो हुनेछ।
खाली भरी तहको साथ डुप्लिकेट लोगो लेयर मर्ज गर्नुहोस्
प्रक्रियाको पहिलो भाग
Wiki को बारे मा तपाईको तह पृष्ठभूमि बिना कालो लोगो, CTRL कुञ्जी थिचेर क्लिक गर्नुहोस्, त्यसोभए लोगोको सिल्हूट चयन गरिएको छ। त्यसो भए शीर्ष प्यानल बारमा जानुहोस् चयन गर्नुहोस्> परिमार्जन गर्नुहोस्> विस्तार। बक्समा जुन विस्तार चयनको लागि देखा पर्दछ, को मान राख्नुहोस् १ पिक्सेल। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, तहमा तपाइँको लोगो को चयन प्रत्येक पक्ष मा 1 अधिक पिक्सल का विस्तार होगा।
कालोसँग चयनमा विस्तारित ठाउँ भर्नुहोस्। तपाईं यसलाई फेरि पेन्ट बकेट, वा CTRL + मेट्नुहोस् आदेशको साथ गर्न सक्नुहुनेछ।
अब, को तह को बारे मा सेतो पृष्ठभूमि र कालो लोगो, कमाण्ड थिच्नुहोस् CTRL + I, ताकि र whiteहरू सेताबाट कालोमा उल्टो गरियो।
प्यानल बारमा, जानुहोस् फिल्टरहरू> शैलीकृत> हावा। हावाको लागि देखा पर्ने बक्समा, विकल्प सुनिश्चित गर्नुहोस् हावा र बाँया बाट छानिएका छन्। स्वीकार्न थिच्दा, लोगोको किनारा एक सानो बायाँ सारियो। यो प्रक्रिया फेरि एक पटक दोहोर्याउनुहोस् ताकि प्रभाव डबल छ। त्यसो भए फेरि पूरै प्रक्रिया गर्नुहोस्, तर विकल्पको साथ दायाँ चयनितबाट, किनारमा विरूपण प्रत्येक छेउमा बराबर छ। दायाँ तिर प्रभाव डबल गर्न नबिर्सनुहोस्।
एक पटक यो सकिएपछि, तह रंगहरु उल्टाउँदछ CTRL + I आदेश थिचेर।
प्यानल बारमा, जानुहोस् फिल्टर> ब्लर> गौसियन ब्लर र मान राख्नुहोस् १ पिक्सेल। बक्स खोल्नुहोस् स्तर (CTRL + L) र कालो आउटपुट स्तरमा सेट गर्नुहोस् 72.
मोड चयन गर्नुहोस् Subexpose रंग तह रोक्छ र कम गर्दछ अस्पष्टता %०%।
र B्ग जलाउनुहोस् र अस्पष्टता कम गर्नुहोस्
नयाँ तह बनाउनुहोस्
एकचोटि यो प्रक्रिया सेतो पृष्ठभूमि तहको साथ गरिन्छ, नयाँ लेयर सिर्जना गर्नुहोस् यो माथि जान।
को तहमा पृष्ठभूमि बिना कालो लोगो, CTRL कुञ्जी थिचेर क्लिक गर्नुहोस् ताकि लोगो चयन गरियो। खोज्छ चयन गर्नुहोस्> परिमार्जन गर्नुहोस्> फेडr, र फेड चयन बक्समा, को मान राख्नुहोस् २ पिक्सेल।
त्यो क्षेत्र अझै चयनितको साथ, आफैलाई स्थान दिनुहोस् तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको नयाँ लेयरमा र कालोले त्यो ठाउँ भर्नुहोस्। तपाईं यसलाई CTRL + मेट्न सक्नुहुन्छ। लेयर भर्न लाई कम गर्नुहोस् 40%।
यस लेयरमा, प्यानल बारमा जानुहोस्, तह> तह शैली> बेभेल र एम्बोस र निम्न समायोजनहरू बनाउँनुहोस्: शैली> मिटर बाहिर, गहिराई> %०%, आकार> २० पिक्सेल, कोण> १ 50० °, उचाई> ° 20 °, अस्पष्टता ०%; छाया मोड> रैखिक बर्न, छाया अस्पष्टता> २२%। वैश्विक प्रकाश प्रयोग विकल्प पनि अचयन गर्नुहोस्। बाँकी विकल्पहरू उस्तै कन्फिगर गरिएको छ।
तह शैली> बेभेल र एम्बोस सेटिंग्स
उही बक्समा, विकल्पमा जानुहोस् भित्रि छाया, निम्न समायोजनहरू बनाउनुहोस्: ब्लेन्डि Mode मोड> रैखिक बर्न, अस्पष्टता> १०%, कोण> १10 °, आकार> p० पिक्सेल। अनचेक ग्लोबल लाइट प्रयोग गर्नुहोस्। बाँकी विकल्पहरू उस्तै कन्फिगर गरिएको छ।
यो सकियो! यसले कुनै पृष्ठभूमि बिना कालो लोगोको पहिलो तह लुकाउँछ र शीर्ष दुई र काठ बनोट मात्र देखिन्छ। तपाईंले पहिले नै काठको स्ट्याम्पमा लोगो बनाउनु भएको छ!
धूम्रपान BBQ लोगो लकड़ी मा मुद्रित
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी फोटोशप प्रयोग गरेर काठमा लोगोहरू स्ट्याम्प गर्ने
नेटल्फिक्ससँग क्रियटिभको लागि श्रृंखला छ